Munaasabad aan caadi aheyn oo lagu xusayay 1-da Luulyo oo xalay Muqdisho lagu qabtay – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayay 57-sano guuradii kasoo wareegtay markii xurnimada qaateen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur.
Munaasabada oo lagu qabtay xarunta dowlada hoose ee Xamar waxaa kasoo qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya, Gudoonka sare ee Baarlamaanka labada Aqal, Ra’isul Wasaaraha , Wasiiro , Xildhibaano katirsan labada Aqal iyo Masuuliyiin kale.
Inta badan dadkii ka hadlay Munaasabada ayaa ku dheeraaday kahadlida dagaalkii iyo dhibkii loo soo maray xuriyada ayno hada harsaneyno iyo sidii aysan dadka Soomaaliyeed uga faa’iideesan xuriyada dhiiga badan ku daadatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhiig badan ku daatay sidii Soomaaliya ay xor u noqon laheed, waxa uuna amaanay dhalinyaradii iyo dadkii kale ee usoo dagaalamay in xurnimada la qaato sanadkii 1960-kii.
Farmaajo ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in Soomaaliya ay mar kale isku soo laaban doonto ayna gacmaha is qabsan doonaan, waxa uuna balan qaaday in uu dib u bilaabeyso dowladiisa Wadahadalii Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Ugu dambeyntii markii la gaaray 12-ka Habeenimo xalay ayaa mar qura waxaa is qabsaday dhawaqa bulaleer circa loo ridayay, waxaana xalay Magaalada Muqdisho aheed habeen ka badalan haweenada kale oo si weyn looga dabaal dagayay xuska 1-da Luulyo.
The post Munaasabad aan caadi aheyn oo lagu xusayay 1-da Luulyo oo xalay Muqdisho lagu qabtay appeared first on Ilwareed Online.